खल्तीले फिर्ता ल्यायो रिफर गरी अनलिमिटेड कमाउने अफर, यसपटक ‘बैंक लिंकमा’
काठमाण्डौ । अतिरिक्त आम्दानी गर्ने तरिकाहरुमा रुचि राख्ने व्यक्तिहरुका लागि खल्तीले बैंक लिंक रिफर गरी कमाउन सकिने अफर फिर्ता ल्याएको छ। यस अभियानमा खल्ती केवाईसी प्रमाणित भएका जोकोहीले आफ्नो आफ्नो परिवार र साथीभाइलाई बैंक खाता लिंक गर्न रिफर गरी आम्दानी गर्न सक्नेछन्। प्रत्येक रिफरमा प्रयोगकर्ताले रु. ५० कमाउनेछन्। खल्तीमा...
डिजिटल वालेटमा क्रेडिट कार्डबाट लोड गरिएको रकममात्र बैंक ट्रान्सफर नहुने
काठमाण्डौ। नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा गत वैशाख १९ मा जारी निर्देशनअनुसार अब क्रेडिट कार्डबाट लोड गरिएको रकम बैंकमा ट्रान्सफर गर्न नमिल्ने प्रावधान लागू भएको छ। सो प्रावधान खल्ती डिजिटल वालेटले २ वर्षअघिदेखि नै लागू गर्दै आइरहेको थियो। यस निर्देशन लागू भएलगत्तै अब क्रेडिट कार्डबाट लोड गर्ने प्रयोगकर्ताले रकम वस्तु तथा सेवाको...
काठमाण्डौ । खल्ती डिजिटल वालेटमा माछापुच्छ्रे बैंकको खाता लिंक गर्ने सेवा उपलब्ध भएको छ। खल्ती र माछापुच्छ्रे बैंकबीचको यससम्बन्धी साझेदारी भएको हो। यस सेवा सुचारु भएलगत्तै ‘खल्ती’ सँग पहिलोपटक बैंक लिंकका रुपमा माछापुच्छ्रे बैंक लिंक गर्ने सबै प्रयोगकर्ताले रु. १०० बोनस तुरुन्तै प्राप्त गर्ने छन्। यसका साथै एकजना भाग्यशाली...
खल्तीमा रु. ५० मै रु. १.३५ लाखबराबरको ‘वान प्लस १० प्रो’ जित्ने मौका
काठमाण्डौ । खल्ती डिजिटल वालेटले मात्र रु. ५० मा रु. १ लाख ३५ हजारबराबरको ‘वान प्लस १० प्रो’ जित्ने अफर ल्याएको छ। यसका सथै रिचार्ज गर्ने एकजना भाग्यशाली प्रयोगकर्ताले १ लाख खल्ती पोइन्ट्स जित्ने मौका पनि पाउनेछन्। प्रयोगकर्ताले यस अफरमा सहभागी हुनका लागि खल्ती एपको ‘फिचर्ड सर्भिसेस’मा गएर ‘खल्तीमा वान प्लस १० प्रो’ बाट...
‘मिस नेपाल’ को रजिस्ट्रेसन खुल्यो, खल्तीबाटै रजिस्ट्रेसन र भोटिङ गर्न सकिने
काठमाण्डौ । ‘मिस नेपाल’ को रजिस्ट्रेसन खुलेको छ। सोको रजिस्ट्रेसन र भोटिङका लागि नेपालको अनलाइन भुक्तानी सेवा प्रदायक ‘खल्ती डिजिटल वालेट’ सँग साझेदारी भएको छ। यसपालिको मिस नेपालमा सहभागी हुन इच्छुक सबैले खल्तीमार्फत रजिस्टर गर्न सक्नेछन्। यसका साथै प्रयोगकर्ताले खल्तीमार्फत आफूलाई मनपर्ने मिस नेपाल प्रतियोगीलाई...
खल्तीबाट फ्लाइट टिकट बुकिङ गर्दा लखपति बन्ने मौका र क्यासब्याक जित्नुहोस्
काठमाण्डौ । ‘खल्ती’ डिजिटल वालेटले फ्लाइट टिकट खरिदमा लखपति बन्ने मौका लिएर आएको छ। यस अफरअन्तर्गत फ्लाइट टिकट खरिदमा एक भाग्यशाली विजेतालाई १ लाखको नगद उपहार प्राप्त हुनेछ। यतिमात्र हैन हरेक हप्ता दुईजनालाई फ्लाइट टिकटमा १००% क्यासब्याक पनि प्राप्त हुनेछ। हालैका वर्षमा ‘खल्ती’ फ्लाइट टिकट बुकिङका लागि निक्कै नै सहज...
खल्तीमार्फत अब स्वास्थ्य बीमा बोर्डको बीमा प्रिमियम तिर्न सकिने
काठमाण्डौ । खल्तीले समयमै स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम भुक्तानी गर्न सकिने भरपर्दो सुविधा सुरु गरेको छ। सेवाग्राहीले अब खल्तीमार्फत स्वास्थ्य बीमा बोर्डको बीमा प्रिमियम तिर्न सक्नेछन्। स्वास्थ्य बीमा बोर्ड नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित एक सामाजिक सुरक्षा योजना हो। जसअन्तर्गत जोकोहीले कुनै पनि आर्थिक बोझ नलिई उच्च गुणस्तरीय स्वास्थ्य...
‘खल्ती’बाट वर्ल्डलिंकको बिल भुक्तानीमा प्रयोगकर्तालाई १०% भ्याट फिर्ता
काठमाण्डौ । ६ लाख ५० हजार वर्ल्डलिंक घरपरिवारलाई डिजिटल नेपालतर्फ सशक्त बनाइने भएको छ। किनकि नेपालमा पहिलोपटक वर्ल्डलिंक प्रयोगकर्ताले खल्तीमार्फत आफ्नो बिल भुक्तानीमा भ्याट रकमको १०% फिर्ता पाउन सक्नेछन्। पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक विधेयक २०७६ मार्फत प्रारम्भ गरिएको खल्तीले आन्तरिक राजस्व विभाग (आईआरडी) र...
‘खल्ती’ ले खोज्दै ‘खल्ती लेख स्टार’, रु. ५० हजार जित्ने मौका
काठमाण्डौ । खल्ती डिजिटल वालेट ‘खल्ती लेख–स्टार’ को खोजीमा हिँडेको छ। जसअन्तर्गत ३ जनाले रु. ५० हजार, रु. २५ हजार र रु. १५ हजार जित्न सक्नेछन्। ‘खल्ती लेख–स्टार’ बन्न जोकोहीले खल्ती शब्दको अर्थ (वालेट र पकेट) खुल्ने गरी नेपाली भाषामा विभिन्न लेख रचना गरी पोस्ट गरी ‘खल्ती’ लाई पठाउनुपर्नेछ। इच्छुक व्यक्तिले आफ्नो कला...
‘डान्सिङ स्टार्स नेपाल’ को एकमात्र भोटिङ पार्टनर ‘खल्ती’
काठमाण्डौ । १२ जना अनुभवी कोरियोग्राफरका साथमा विभिन्न क्षेत्रका १२ सेलिब्रेटी प्रतियोगी रहेको ‘डान्सिङ स्टार्स नेपाल’ को एकमात्र भोटिङ पार्टनरका रुपमा नेपालको प्रचलित भुक्तानी सेवा प्रदायक ‘खल्ती डिजिटल वालेट’ले साझेदारी गरेको छ। यो प्रतियोगिता १२ चैतदेखि हिमालय टीभी एचडीमा हरेक शनिबार राति ८ः०० बजेबाट रुपमा प्रसारण भएको...
खल्तीमा बैंक लिंक गर्दा लोड गर्ने झन्झटबाट मुक्ति, साथै रु. १०० बोनस पनि
काठमाण्डौ । खल्ती डिजिटल वालेटले खल्तीमा पहिलोपटक बैंक लिंक गरेमा रु. १०० बोनस पाउने अफर ल्याएको छ। यो अफर लोड गर्ने झन्झटबाट मुक्त गरी अनलाइन भुक्तानीलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो। हाल खल्तीमा लिंक गर्न योग्य २० बैंक उपलब्ध छन्। तसर्थ, पहिलोपटक आफ्नो बैंक खाता खल्तीमा लिंक गर्ने प्रयोगकर्तालाई मात्र बोनस उपलब्ध...
‘खल्ती’बाट बैंक ट्रान्सफर निःशुल्क, नेपालका जुनसुकै बैंक खातामा पैसा पठाउन सकिने
काठमाण्डौ । पैसा ट्रान्सफरलाई अझै सजिलो र सरल बनाउन खल्ती डिजिटल वालेटले निःशुल्क बैंक ट्रान्सफर गर्न सकिने सुविधा उपलब्ध गराएको छ। यसमार्फत प्रयोगकर्ताले निःशुल्क जहाँसुकै बसी ‘खल्ती’मार्फत कुनै पनि बैंक खातामा तत्काल पैसा पठाउन सक्छन्। यो अफर प्रयोगकर्ताका लागि बैंक ट्रान्सफर प्रक्रियालाई सरल र सजिलो प्रक्रिया बनाउन खल्तीको...
काठमाण्डौ । ‘खल्ती’ ले सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सका सबैबिमा ग्राहकहरुका लागि खुसीको खबर लिएर आएको छ। अब ‘खल्ती’ बाट सीधै आफ्नो बीमा प्रिमियम तिर्न सक्नेछन्। यो सेवाले डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहित गर्न सजिलो बनाउने उद्देश्य थालनी गरेको हो। यो सेवाले समयको कमीका कारण ढिलो भुक्तानी गर्ने वा अफिस जानको लागि समय निकाल्ने ग्राहकका...
खल्तीबाट ईएमआई भुक्तानी गर्दा १००% क्यास्ब्याक, साथै स्मार्टफोन जित्ने मौका
काठमाण्डौ । खल्तीमार्फत ईएमआई भुक्तानीमा १००% क्यासब्याक जित्ने सकिने अफर सार्वजनिक भएको छ। यसका साथै यो अफरअन्तर्गत दुई भाग्यशाली विजेताले बम्पर पुरस्कारका रुपमा स्मार्टफोन जित्ने मौका पाउनेछन्। यस अफर ‘ईएमआई डन १००% रिटर्न’ अनुसार हुलास फिन सर्भ, जगदम्बा क्रेडिट एंड इन्भेस्टमेन्ट, स्याकार–होन्डा र एमएडब्ल्इू इन्वेत्मेन्ट...
अब सानिमा बैंकको मोबाइल बैंकिङबाट ‘खल्ती’मा पैसा राख्न सकिने
काठमाण्डौ । नेपालको प्रचलित अनलाइन भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी ‘खल्ती’ ले सानिमा बैंक लिमिटेडसँग सम्झौता गरेको छ। जसअन्तर्गत सानिमा बैंकका ग्राहकलाई सानिमा सजिलो ई–बैंकिङबाट खल्ती डिजिटल वालेटमा सजिलै फन्ड लोड गर्ने र सानिमा सजिलो ई–बैंकिङ एपमार्फत चेक आउट गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ। यो साझेदारीसँगै सानिमा बैंकका...